Somali COVID-19 Talooyin Ka Hay'adda Caafimaadka ee Dadweynaha | Multnomah County
La cusboonaysiiyay: 6/24/2022
Ka hortagga faafitaanka COVID-19
Haddii aad dareento xanuun
Uhelidda daryeel qoyskaaga
Hagitaankii ugu danbeeyay:
Qof kasta oo dad’diisu tahay 5 sano ama kasii weyn tahay wuxuu u qalmaa in uu qaato tallaalka COVID-19. Xataa hadii aad tallaalantahay, sii wad ka taxadaridda caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay, gacmaha dhaqo, kana caawi in qoyska iyo saaxiibadu helaan daryeel caafimaad iyo taageero dhanka caafimaadka maskaxda ah.
Tallaalada COVID-19 waxa ay ka caawin doonaan inay ka ilaaliyaan COVID
Video of COVID Vaccine Soomaali (Somali)
Sidee loo helaa tallaalka COVID-19?
Waxaa jira dhowr qaab oo tallaalka COVID-19 lagu heli karo:
Hel xarun tallaal adigoo isticmaalaaya Helaha Tallaalka ee Oregon
Wac 211 ama 1-866-698-6155 si aad u hesho farmashiga ama goobta caafimaad ee kugu dhow.
Ismaamulka Multnomah wuxuu leeyahay goobo caafimaad oo si joogto ah oo jadwalaysan loogu bixiyo tallaalka COVID-19. Bookho Goobaha Caafimaadka Todobaadlaha ah ee Multco ama wac 503.988.8939 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Waxa aad filanayso marka aad qaadato tallaalka
UMA baahnid inaad noqoto muwaadin Maraykan ah.
Qaadashada tallaalku MA saamayn doonto soo galeetinimadaada ama looma tixgelin doono kaalmo dadweynaha kaaga timi (public charge).
Uma baahnid inaad yeelato ama bixiso lambarka amniga ee bulshada.
Tallaalku waa bilaash.
Ma u baahan tahay gaadiid ku geeya ballantaada tallaalka? Wac 211 or 1-866-698-6155.
Tallaalka difaaca jirka xoojiya ee loogu tala galay COVID-19:
Tallaalka difaaca jirka xoojiya waa tallaal dheeraad ah oo loogu tala galay inta badan dadka horey loo tallaalay si ay tallaalka ukordhiso waxtarkiisa.
Waxaad u qalantaa tallaalka koowaad ee xoojinta difaaca marka ay:
Ugu yaraan 5 bilood kasoo wareegto marka la qaato qaybta labaad ee Pfizer ama Moderna
Ugu yaraan 3 bilood kasoo wareegto marka la qaato qaybta sadexaad ee Pfizer ama Moderna haddii aad tahay qof difaaciisu liito
Ugu yaraan 2 bilood kaddib qaadashada tallaalka Johnson & Johnson
Qof kasta oo jira 12 sano iyo kasii weyn waa in uu qaataa tallaalka ugu horreeya ee xoojinta difaaca jidhka.
Tallaalka xoojinta difaaca ee caruurta 5-11 jirada ah loogu tala galay ayaa sidoo kale diyaar ah. Waa U muhiim in caruurtu ay qaataan tallaaladooda COVID-19 ee aasaasiga ah.
Tallaalka labaad ee xoojinta difaaca:
Tallaalka labaad ee xoojinta difaaca waxay qaadan karaan dadka qaarkiis 4 bilood kaddib tallaalkooda koowaad ee xoojinta difaaca.
Tallaalka labaad ee xoojinta difaaca waxaa qaadan kara dadka da’doodu tahay 12 sano iyo wixii ka weyn kuwaas oo difaacooda jirku liito iyo dhammaan dadka waaweyn ee da’doodu tahay 50 sanno iyo wixii kasii weyn. Qaadashada tallaalka labaad ee xoojinta difaaca wuxuu muhiim u yahay dadka waaweyn, dadka difaacoodu liito, iyo dadka qaba cudurada raaga ee galinaya khattarta badan haddii uu ku dhaco COVID-19.
Macluumaad dheeraad ah: " Tallaalada xoojinta difaaca" iyo "Qaybta saddexaad (OHA)"
Tallaalada loogu talo galay caruurta 5 jirka iyo wixii ka weyn
15-17 jirku uma baahna in qof weyni soo raaco, umana baahna oggolaanshiyaha waalidka gobolkan Oregon gudahiisa. Waxa aanu ku dhiirrigelinaynaa dhallinyarta inay ka qayb geliyaan qof weyn oo ay ku kalsoon yihiin qaadashada go’aamada caafimaad.
5 -14 jirku waa inuu la socdaa waalid, waardiye ama qof uu soo raaciyay waalidku.
Haddii qof aan waalidka ama waardiyaha ahayni la socod 5 -14 jirka, waxa ay ubaahnaan doonaan inay keenaan caddayn sheegaysa oggolaanshiyaha waalidka/waardiyaha. Waalidka ama waardiyaha waxa looga baahan yahay inuu diyaar ku ahaado taleefankiisa si uu uga jawaabo woxoogaa su’aalo caafimaad ah. Caddayn oggolaanshiyo waa laba mid:
foomka oggolaanshiyaha oo saxeexan, ama
Qoraal gacanta lagu qoray ama kombuyuutar lagu qoray oo uu ku jiro magaca waalidka/waardiyaha, xidhiidhka uu dhallinyarta la leeyahay, dhallinyartu taariikhda uu dhashay, bayaan sheegaya in waalidka/waardiyuhu oggolyahay in dhallinyarkan la tallaalo, iyo saxeexa waalidka/waardiyaha.
Macluumaad dheeraad ah ka eeg: " Tallaalka COVID-19 ee loogu tala galay Caruurta iyo Dhallinyarada” iyo “Tallaalka COVID-19 ee dhallinyarada loogu tala galay.”
Uurka iyo naasnuujinta iyo tallaalka COVID-19
Dumarka uurka leh iyo kuwa dhawaan uurka qaaday waxay u badan tahay inay xanuun aad u daran ka qaadaan ama in loo dhigo isbitaalka COVID-19 dartiis. CDC waxay si adag ugu soo jeedinaysaa in ay qaataan tallaalka COVID-19 iyadoo ay dheeraad u tahay tallaalka difaaca jirka xoojiya dadka:
aad dhawaan uur lahayd (oo ay ka mid yihiin dadka naaska nuujinayo),
isku dayaya in ay uur yeshaan hadda, ama laga yaabo in ay mustaqbalka uur yeeshaan.
Macluumaad dheeraad ah ka eeg Uurka, Naasnuujinta iyo Tallaalka COVID-19
Waxyaabo Kale oo Dheeraad ah oo Tallaalka COVID-19 ah
Saamaynaha xunxun ee tallaalka COVID-19
Tallaalada COVID-19 iyo xaaladaha caafimaad ee hore ujiray
Su’aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan tallaalka COVID-19 ee 12-17 jirka
Su’aalaha Inta Badan La Iska Weydiiyo Tallaalada COVID-19 ee loogu talagalay 5-11 Sanno Jirrada
[ Kor ku laabo ]
Waa inaad is shaybaadho haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama haddii aad la kulantay una dhawaatay qof qaba COVID-19. La kulanka dhow waxaa laga wadaa inaad ujirsato lix fuudh qof muddo 15 daqiiqo ama in ka badan maalin gudaheed, ayada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn maaskaro. Wax badan ka ogow “Baaritaanka COVID-19 ”
Haddii aad xanuunsan tahay ama aad khatar u gashay COVID, waxaad u baahan tahay in aad muddo guriga joogto. Wac 2-1-1 haddii aad taageero u baahato. Ogsoonow ikhtiyaaraadka aad aysato: Macluumaadka loogu tala galay Bulshada
Fayraska sababa COVID-19 waxa uu si fudud uga fidaa qof illaa qof kale. Si aad uga hortagto inaad xanuusato. Si aad uga hortagto in aad xanuunsato amase aad fayraska faafiso:
Ka fikir in aad xirato maaskare
Gacmahan dhaqo ugu yaraan 20 ilbiriqsi
Ka fogow taabashada wajigaaga
Dabool qufacyadaada iyo hindhisooyinkaaga
Ha ahaadaan isu imaatinadu kuwo ay dadku kooban yiin, wakhti kooban ah, oo dibadana ah markasta oo ay macquul tahay
Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha inta badan la taabto
Dadka iyagu leh xaalado caafimaad oo hore ujiray, sida xiiq, macaan ama wadno ama sambabo xanuun, waxa ay khattar dheeraad ah ugu jiraan in ay xanuun aad udaran yeeshaan haddii ay qaadaan COVID-19. Eeg “ Tilmaamaha sida qofku ammaan isugu ilaalinayo haddii uu dad badan la joogo.”
Laga bilaabo 12ka Maarso, maaskaraha loogama baahan doono in lagu xidho gudaha dhismayaasha dadweynuhu isugu yimaadaan ee Oregon. Shaqo geliyayaasha iyo ganacsiyadu waxa ay samaysan karaan shuruudo u gaar ah marka ay noqoto xidhashada maaskaraha. Maaskaraha weli waa looga baahan yahay in la xirto meelaha qaar sida goobaha daryeelka caafimaad.
Ayada oo ay sabab u tahay faafitaanka faraha badan ee COVID, waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Ismaamulka Multnomah waxay ku talinaysaa xirashada maaskaraha marka la joogo dhismeyaasha gudahooda ilaa dhammaadka Juun markaasoo xaaladaha COVID-ka la rajaynayo in ay hoos usoo dhacaan. Xirashada maaskaraha marka la joogo dhismayaasha gudahooda ama goobaha dadweynaha ee dadku ku badan yahay ayaa ah waxa ugu muhiimsan haddii aadan si buuxda uga tallaalnayn COVID-19 ama aad khattar badan ugu jirto xanuun daran.
Waxyaabo badan ka ogow bogga Ismaamulka Multnomah: Waji daboolka, maaskarooyinka iyo COVID-19: waxa aad u baahan tahay in aad ka ogaato
Video of COVID-19 Reopen Somali
Haddii aad bilawdo inaad dareento xanuun:
Guriga joog kana fogow dadka kale.
Isbaar hadday macquul tahay. Wac dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad si laguu baaro. Ama Hel baaritaanka COVID-19.
Guriga joog illamaa iyo dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ay kugu wergeliso inaad dadka kale ag joogi karto markale.
Samee waxyaalaha aad caadi ahaan samaysid si aad u ladnaato: seexo, naso, cab dareeraayal badan.
Haddii cudurka baadhitaan lagaaga helo:
Dadka qaba COVID-19 waa in ay joogaan guryaha shan cisho, oo ayna xidhaan maaskaro maalmo dheeri ah oo 5 cisho ah marka ay dadka ag joogaan. Dugsiyadu waxa ay sii wadi doonaan inay ardayda ka joojiyaan dugsiga 5 cisho haddii ay leeyihiin astaamo ama lagaba helay COVID-19.
Wac daryeel caafimaad bixiyahaaga sida ugu dhakhsiyaha badan. Ayada oo ay ku xirantahay da’daada ama xaaladdaada caafimaad, waxaa laga yaabaa in aad daaweyn hesho. Qaar kamid ah daawooyinka COVID-19 waxaa qasab ah in la bilaabo 5 maalmood gudahood marka astaamuhu bilowdaan.
Raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah sida ugu dhakhsiyaha badan haddii adiga ama qof da’da uu doono ha ahaadee uu yeesho calaamadahan digniinta degdegga ah:
Neefsiga oo dhib noqda
Xannuun joogto ah ama cadaadis qofku ka dareemayo shafka
In awood qofku uyeelan waayo inuu hurdada ka koco ama sooba jeedo
Wajiga ama bushimaha oo buluug ama sibidhi ah
Calool xanuun aad udaran
Wac 911 ama sii wac inta aanad tagin xarunta daryeelka degdegga ah ee deegaankaaga.
Usheeg hawlwadaha in adiga ama qofka daryeelka ubaahani laga yaabo inuu qabo COVID-19.
Ogow waxyaabaha ku saabsan ikhtiyaaradka fasaxa xanuunka, marka aad shaqada kusoo noqon karto, iyo in aad u baahan tahay in aad loo shaqeeyahaaga u sheegto iyo in kale haddii COVID-19 lagaa helo. Eeg “COVID-19 iyo la qabsiga shaqadaada - U sheegidda cidda aad u shaqayso in aad la xanuunsan tahay COVID19”
Haddii aanad lahayn dhakhtar, wac 211 ama Xarumaha Caafimaadka ee Daryeelka Aasaasiga ah ee Gobolka Multnomah adigoo ka wacaaya 503-988-5558. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah. Xarunta Caafimaad ee Mulnomah County
Uma baahnid inaad yeelato caymis caafimaad.
Uma baahnid inaad yeelato dakhli.
Waxa aad heli kartaa daryeel caafimaad iyada oo aan la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo.
Fulinta Sharciyada Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taas oo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaallada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah.
Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Kaalmada Lacageed eedka Helayso Dadweynaha.
Waxyaabo badan ka ogow bogga Ismaamulka Multnomah: “Tilmaamaha ku saabsan sida loola tacaalo cudurka safmarka ah”
Xogta Cusub ee COVID-19 ee Maamulka Caafimaad ee Oregon
Xarunta Wicitaanka Caafimaadka Maskaxda ee Multnomah County
Daryeelka caafimaadka loogu tala galay soo galootiga iyo qaxoontiga (CAWEM)
Hagaha Dhallinyarta iyo Qoyska
Tilmaamaha Ganacsiyada iyo Shirkadaha
Macluumaadka ku saabsan Guri ka Saarista khusaysa COVID-19: Sida aad caawimo ku heli karto haddii aad hesho ogaysiis ku saabsan in guriga lagaa saarayo ama haddii aad u baahato in lagaa caawiyo kirada
Su`aalo ma qabtaa?
Booqo 211 info ama wac 2-1-1 inta u dhaxaysa 8 subaxnimo illaa 11 galabnimo. Turjumidda waa kuu diyaar.
Talaabooyinka la iska rabo in la qaado marka xaaladda COVID ay isbadalayso
Diyaar u ahow isbadalada, baro waxa lagaa rabo in aad samayso haddii adiga ama dadka aad la joogto ay khatar badan ugu jiraan, kana fikir in aad difaacyo dheeraad ah samaysato.
Yaa ay tahay inuu is shaybaadho xaggee se ayaa layska shaybaadhi karaa.
In badan oo inaga naga mid ah waxay la nool yihiin qoys fara badan, saaxiibo, ama kuwo aan qol isla degenahay hal guri, ama waxaan la noolnahay caruur, waalidkeen waalidkiis iyo waalidiinteen. Waa kuw
Ogow waxa aad ubaahan tahay inaad samayso haddii aad qabto COVID ama aad u baylahday qof qaba COVID.
Maaskarooyinku waxay ku siinayaan difaac dheeraad ah oo ka dhan ah COVID-19 xataa haddii aad tallaalan tahay.
Tilmaamaha la qabsiga inta lagu gudo jiro safmarka | Coping - Somali
Halkan waxa ah waxyaalo aad samayn karto maalin kasta si aad u daryeesho caafimaadkaaga maskaxeed iyo jidheed.